Codsiyada Mashiinnada Laydhka ee loo yaqaan 'CO2 Laser Machines' ee loogu talagalay waaxyaha birta - Laser Dahabka ah
Mashiinka Korantada ee CO2
Mashiinka goynta Laser Flatbed
Mashiinka Galvo Laser
Mashiinka goynta Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Leykarka
Label Laser Die Cut Mashiinka Mashiinka
Mashiinka Laser Customka
MARS Series Laser Cutter
Mashiinka Laser Dharka
Mashiinka Laascaanood ee Laydhka
Mashiinka Goynta Fibreerka Laasarka
Mashiinka goynta Mashiinka Mashiinka Mashiinka
Mashiinka goynta Mashiinka Laasarka ah ee Birta
Sheet and Cut tube Laser Cutter
3D Robot Laser Cutter
Qeybta Aan Birta Ahayn
Kala-baxa hawada hawada
Sublimation Fabric daabacan
Dharka Ciyaaraha & Xirfadaha Firfircoon
Dharka & Dharka
Kaarbadaha & Mootooyinka
Codsiyada Laser-ka CO2
Marka laga hadlayo kala sooca adag ee dareeraha ah, maroyinka miiraha ayaa muhiim u ah howlgalka biyaha. Qalabkayaga gaarka ah ee goynta laser-ka loo yaqaan 'laser goynta' ayaa si dhab ah u abuuri kara taam ku habboon cabir kasta oo taarikada filterka ah.
Jarida iyo feerida boorsooyinka hawada, nidaamka goynta laser wuxuu leeyahay faa iidooyin muuqda marka la barbar dhigo nidaamka goynta geedka. Qalabka laser-ka ayaa adeegsada habka kuleylka. Ma jiraan wax kala daadasho ah oo ku saabsan sheyga.
Si ka duwan inta badan qalabka birta-birta ah, agabyada korantadu waxay u baahan yihiin hawlqabad wanaagsan iyo cimri dheeri. Laser waa qalabka ugu habboon ee goynta bey'adda loogu talagalay agabyada korantada.
Faa'iidooyinka badan ee isticmaalka hawo marooyinka hawada ayaa kordhisa baahida loo qabo. Kordhinta iyo hufnaanta sare ee goynta laser-ka ayaa fududeyn kara habraaca loo adeegsado dharka.
Macaamiisha waxay raacaan dharka shaqsiyeed waa isbeddelada hadda jira. Adeegsiga mashiinka goynta laser-ka si loo jaro dharka gogosha ayaa waqtigaaga lumiya isla markaana buuxiya baahiyaha badeecadaha sida gaarka loo leeyahay.
Nidaamka goynta unugyada goynta 'GOLDEN LASER' ee goynta shaybaarka laser dhinaceeda wuxuu gaar u yahay dhameystirka calaamadaynta, waa teknolojiyad goynta laser-ga ah oo beddeleysa orodka gaagaaban iyo shaqada dhexdhexaadka ah si aaminnimo iyo hufnaan leh, oo awood u leh inuu si qotodheer u socodsiinayo qulqulka shaqada oo dhan.
Maqaarka & Kabaha
Xalka dahabka ah ee maqaarka & maqaarka kabaha, oo ku qalabeysan nidaamka xakamaynta dhaqdhaqaaqa sareeya, oo isku dhafan qaab dheellitiran, buundooyin iyo buundooyin caqli gal ah iyo howlo kale oo ay weheliso tikniyoolajiyadda laser ee aan la jaanqaadi karin si loogu badalo qalabka caadiga ah ...
Xalqadaha dharka lebiska ee dahabka ah ee loo yaqaan 'Laser leerre' warshadaha ayaa inta badan loo sameeyay soosaaridda dufcadaha yar yar, goynta hal-goyska ah iyo daloollada, muunad dharka lagu tolo, iyo dhar-xawaare sare oo dhar-ku-habboon ...
Beerta warshadaha ee Laser Golden, Wadada Tianxing, Hengdian Street, Chuanlong Avenue, Degmada Huangpi, Wuhan, Hubei, Shiinaha
Xiriirimaha caanka ah
Mashiinka Mashiinka Yaraynta ee loo yaqaan 'CO2 Laser Cut Cutver Machine'
Muunad Muuqaal ah